Xinhua Myanmar - တရုတ်နိုင်ငံထုတ် COVID-19 ကာကွယ်ဆေး၏ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကို ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဒူတာတေး ချီးကျူးပြောကြား
ဖိလစ်ပိုင် ကာကွယ်ဆေး ဒူတာတေး
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ Quezon မြို့တွင် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၁၇ ရက်တွင် ပြုလုပ်သည့် ၈၄ နှစ်မြောက် ဖိလစ်ပိုင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့နေ့(AFP) အခမ်းအနားတွင် မိန့်ခွန်းပြောကြားနေသော ဖိလစ်ပိုင် သမ္မတဒူတာတေးအား တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ) Asia
မနီလာ၊ဇန်နဝါရီ ၁၉ ရက်(ဆင်ဟွာ)ဘာသာပြန်/ကိုငယ်
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသမ္မတဒူတာတေးက တရုတ်နိုင်ငံ ဇီဝဆေးဝါးထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီများမှ တီထွင်ထုတ်လုပ်သည့် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးများသည် ဘေးကင်းလုံခြုံမှုရှိကြောင်း မှတ်ချက်ပြုပြောကြားခဲ့ပြီး တရုတ်ကာကွယ်ဆေးများဝယ်ယူရန် သူ၏အစိုးရအဖွဲ့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းအပေါ် ကာကွယ်ပြောကြားလိုက်သည်။
ဇန်နဝါရီ ၁၈ ရက် ညပိုင်းတွင် နိုင်ငံပိုင်ရုပ်မြင်သံကြားမှတစ်ဆင့် မိန့်ခွန်းပြောကြားရာ၌ သမ္မတဒူတာတေးက Sinovac နှင့် Sinopharm အပါအဝင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ကာကွယ်ဆေးများကို အင်ဒိုနီးရှား ၊ တူရကီ ၊ အီဂျစ် ၊ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု(UAE) ၊ ဘရာဇီး စသည့်နိုင်ငံများတွင် အသုံးပြုနေကြကြောင်း နှင့် လက်ရှိအချိန်ထိ ယင်းနိုင်ငံများတွင် လူသေဆုံးမှု သတင်းများ မရှိကြောင်း ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
ဒူတာတေးက ပြီးခဲ့သောရက်သတ္တပတ်အတွင်း အသုံးပြုမှုတွင် တရုတ်ကာကွယ်ဆေးများသည် “ဘေးကင်းမှု ၊ သေချာမှု ၊ လုံခြုံမှု ” ရှိကြောင်း ဆိုသည်။
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအစိုးရသည် Sinovac မှ ထုတ်လုပ်သည့် CoronoVac ကာကွယ်ဆေး အရေအတွက် ၂၅ သန်း ရရှိရန် အာမခံထားပြီး ယင်းကာကွယ်ဆေးကို ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ အစားအစာ နှင့် ဆေးဝါးစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ထံမှ အရေးပေါ်သုံးစွဲခွင့် (EUA) ခွင့်ပြုချက် ရရှိထားကြောင်း သိရသည်။
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသည် ကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်သည့် အနည်းဆုံး ကုမ္ပဏီ ၇ ခုနှင့် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်နေပြီး ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွင်း COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ၁၄၈ သန်း ဝယ်ယူရရှိနိုင်ရန် ကြိုးပမ်းနေသည်။
၎င်း၏ ရည်မှန်းချက်မှာ ယခုနှစ်အတွင်း ဖိလစ်ပိုင် ပြည်သူ သန်း ၅၀ မှ ၇၀ အကြား (သို့မဟုတ်) နိုင်ငံ့လူဦးရေ၏ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးကာ ပြည်သူများအကြား ကိုယ်ခံအားစနစ်ရရှိစေရန်ဖြစ်သည်။
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတွင် ဇန်နဝါရီ ၁၈ ရက်က COVID-19 အတည်ပြုလူနာသစ် ၂,၁၆၃ ဦးရှိခဲ့ရာ ယင်းမှာ နှစ်လကျော်ကာလတွင် နိုင်ငံအတွင်း အရေအတွက်အများဆုံး ကူးစက်မှုဖြစ်ကြောင်း ဖိလစ်ပိုင်ကျန်းမာရေးဌာန(DOH) ကဆိုသည်။(Xinhua)
The Department of Health (DOH) of the Philippines reported 2,163 new COVID-19 cases on Monday, the highest in more than two months in the Southeast Asian country. Enditem
Photo caption – File picture shows Philippine President Rodrigo Duterte speaks during the celebration of the 84th anniversary of the Armed Forces of the Philippines (AFP) inside Camp Aguinaldo in Quezon City, the Philippines, Dec. 17, 2019. (Xinhua/Rouelle Umali)
Previous Article အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ အနောက်ဆူလာဝေစီပြည်နယ်၊ မာမူဂျူမြို့တွင် လှုပ်ခတ်ခဲ့သော ငလျင်ကြောင့် သေဆုံးသူ ၉၆ ဦးအထိရှိလာ
Next Article ဖိလစ်ပိုင်နှင့် တရုတ် ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းအကြား အကြီးစား ရထားလမ်းစီမံကိန်း သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုး